७७ वर्षीय वृद्धसँगको प्रेममा २० वर्षे युवती : डेटिङ एपबाट सुरु भएको चिनजान बिहेसम्म ! – Nepal Press
२०७८ मंसिर २१ गते १३:५६
लन्डन । प्रेममा उमेरले फरक पार्दैन । यो कुरालाई २० वर्षीया किशोरी विद्यार्थीले सावित गरेकी छिन् । म्यानमारबाट आएकी यी विद्यार्थी इङ्गल्याण्डका ७७ वर्षीय वृद्धसँग प्रेममा परेकी छन् र दुवैजना सकेसम्म चाँडो घर बसाउन चाहन्छन् । अचम्मको कुरा त यो छ कि उनीहरु अहिलेसम्म आमुनेसामुन्ने भेट भएका छैनन् । उनीहरुले एक अर्कालाई अलाईनमा मात्र देखेका छन् ।
डेली स्टारको एक अध्ययन अनुसार म्यानमारकी जो महज २० वर्षकी भएपनि इङ्ल्याण्डको बाथ सहरमा बसेका ८८ वर्षीय डेविडलाई दिल दिएर बसेकी छिन् ।
उनीहरुलाई यस्तो लाग्छ कि दुवैजना एक अर्काको लागि बनेका हौं त्यसैले उनीहरु छिटो विवाह गर्न चाहन्छन् । जो हाल अध्ययनरत विद्यार्थी हुन् भने डेविड संगीतकार हुन् । अहिले म्यानमारको अवस्था सामान्य नभएकाले डेविड चाहेर पनि त्यहाँ जान पाउँदैनन् ।
जो भने इङ्गल्याण्ड जानको लागि पासपोर्ट र भिजाको प्रतिक्षा गरिरहेकी छिन् उनी यो काम सकिएलगतै डेविडलाई भेट्न जाने र विवाह गर्ने तयारीमा छिन् ।
जो र डेविड करिब १८ महिनाअघि डेटिङ साईटमा भेटेका थिए, त्यसबेलादेखि दुवैले लगातार एकअर्कासँग कुरा गरिरहेका छन् ।
तर, दुवै एकपटक पनि आमनेसामने हुन सकेनन् । दुबैको प्रेमकथाको सुरुवात पनि कम अनौठो थिएन । जो यस्तो व्यक्तिको खोजि गरिरहेकी थिइन् जसले उनको पढाईमा आर्थिक सहयोग गर्न सकोस् र डविड भने फ्लर्ट गर्ने कसैको खोजीमा थिए ।
डेविडले भने, ‘म मनको कुरा मात्र सुन्छु , दुई व्यक्तिमा भावना र प्रेम हुँदा विश्लेषण किन ? म सधै हृदयदेखि सधै जवान छु र मेरा धेरै युवा साथिहरु छन् ।’
जोले आफ्नो डेटिङ प्रोफाइलमा बेलायतका मानिसहरूलाई आकर्षित गर्न आफ्नो स्थान म्यानमारको सट्टा बेलायत राखेकी थिइन् । उनले भनिन्, ‘मैले यो केवल मानिसहरूले मेरो प्रोफाइल देखून् भनेर राखेको हो र मैले आफैं डेभिडलाई सत्य भनें । किनभने मेरो मन शुद्ध छ । म मेरा आमाबाबुसँग बस्दिन, त्यसैले म मेरो पढाइमा आर्थिक रूपमा कसैले मद्दत गरोस भन्ने चाहन्छु । यस उद्देश्यका लागि मैले प्रोफाइल बनाएको हो । यद्यपि, मैले डेविडमा साँचो प्रेम पाएको छु ।’
डेविड र जोलाई लाग्छ कि उमेरको अन्तर धेरै भएपनि हामी एकअर्काबिचको सम्बन्ध बलियो छ, जसको कारण उनीहरूले आफ्नो बाँकी जीवनसँगै बिताउन सक्षम हुनेछन् ।
डेविडले भिसा पाएलगत्तै इङ्ल्यान्ड आउने र विवाह गर्ने बताए । संसारले हाम्रो बारेमा के सोच्दछ हामीलाई वास्ता छैन । हामी एकअर्कालाई धेरै माया गर्छौं र यो प्रेमलाई वैवाहिक सम्बन्धमा परिणत गर्न चाहन्छौं ।
प्रकाशित: २०७८ मंसिर २१ गते १३:५६